Marcelin ANDRIANTSEHENO - « Il nous faut une politique noble »
Hatreto alou dia ny politika nentin’dRajao ny hita fa tena nahomby, satria nahitana fivoarana avokoa ny sehatra rehetra nisy teto Madagasikara,
Ny zavatra nasehon’ny filoha omaly ireny no atao hoe politika noble. Sady manara-dalàna no mitsinjo ny ho avin’ny malagasy.
Amiko dia ny fifidianana irery ihany no vahaolana tokana hamahana ny krizy politika eto Madagasikara amin’izao.
8 septembre 2018 à 14 h 55 min
araka ny fomba fijeriko dia, efa politika tsara lamina izao ataon’ny filoha Hery izao, izany hoe fametraham-pialana arakin’ny lalam-panorenana, ary fitondrana feno asa sy VINA. ko inona indray no mbola ho resahana ohatr’izay.
Les grandes découvertes n’ont rien découvert